Report Inquiry
Fikarohana taratasy fanamarinana
Rafitra fitadiavana taratasy fanamarinana Anbotek
1. Fenoy ny anaran'ny mpangataka sy ny laharan'ny fanamarinana ny fanontaniana ilainao ao amin'ny boaty fampidirana (azafady ampidiro ny laharan'ny tatitra ho an'ny tatitra ihany, ary ny tenimiafina fidirana dia ny datin'ny fahavitan'ny raharaha, andro, volana ary taona. Raha tapitra ny tatitra fanamarinana tamin'ny 11 Jona 2017, ny tenimiafina fidirana dia 11062017).
2. Aza mampiasa ny fanalahidin'ny habaka rehefa mameno ny taratasy.
3. Tsy tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana ny taratasy fanamarinana tsy nandalo ny fangatahan'i Anbotek.
4. Raha mbola tsy misy ny certificato, dia mety ho tsy tafiditra ao anatin'ny angon-drakitray ny taratasy fanamarinanao.Mifandraisa aminay azafady.
Noho ny fitsipiky ny tsiambaratelon'ny fampahalalana momba ny mpanjifa, ity rafitra fanadihadiana ity dia tsy afaka manamarina ny maha-ara-dalàna ny laharan'ny fanamarinana nanontanianao sy ny fampahalalana fototra momba ny vokatra.
Adiresy mailaka: Service@anbotek.com
Taratasy fanamarinana / tatitra momba ny fanadihadiana sy fanambarana fizarana fitsapana anbotek:
1. Ity serivisy fanadihadiana ity dia tsy mihatra afa-tsy amin'ny mpanjifa izay nanao sonia ny fifanarahana fitsapana nankinina tamin'ny orinasanay mba hanamarinana ny fizotran'ny fitsapana ny santionany ary hanamarina ny valin'ny fitsapana ny santionany.Ny valin'ny fitsapana farany amin'ny santionany dia miankina amin'ny tatitra andrana natolotry ny orinasanay amin'ny mpanjifa.
2. Raha tsy misy fanomezan-dàlana an-tsoratra avy amin'ny orinasantsika, dia tsy misy olona afaka mandika, mamerina na mampiasa ity angona fangatahana ity amin'ny endrika hafa; Raha tsy misy fanamafisana an-tsoratra momba ny orinasanay, ity angona fanadihadiana ity dia tsy maneho fanombanana ny santionany natolotra sy ny vokatra mitovy amin'izany. amin'ny santionany, ary tsy misy fiantraikany amin'ny fanamarinana izany.
3. Ny fatiantoka ara-toekarena ateraky ny mpanjifa, ny orinasa na ny antoko fahatelo noho ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny fahefan'ny mpanadihady azy manokana, ny fahalalana tsy ara-dalàna momba ny hafa na ny fanomezan-dàlana tsy nahazoan-dalana avy amin'ny hafa dia ho an'ny mpanjifa ihany, ary ny orinasa dia tsy hitondra na inona na inona. adidy ara-dalàna.
4. Raha manana fanoherana ny valin'ny fanontaniana ny mpanjifa, azafady mba mifandraisa amin'ny orinasanay ara-potoana.Ny orinasanay dia hanamarina izany ao anatin'ny fotoana voalohany ary hanampy amin'ny fiatrehana izany.
5. Tsy hita ny taratasy fanamarinana raha:
1) mety ho tsy tafiditra ao amin'ny database-nay ny taratasy fanamarinana nanontanianao.